DiskActivity inoongorora mashandisiro eedu rakaomarara disk, yemahara kwenguva yakatarwa | Ndinobva mac
DiskActivity inoongorora mashandisiro eedu rakaomarara disk, yemahara kwenguva pfupi
Takatanga neMuvhuro nechisarudzo chitsva chemahara kwenguva yakati rebei, panguva ino tinotaura nezvechikumbiro chingave chisina maturo chevashandisi vazhinji, zvisinei kune vamwe vazhinji zvinogona kubatsira. Kana iwe uine makore anodarika makumi matatu ekuberekwa, zvirokwazvo iwe uchayeuka maPC ekutanga, ayo nenzira yaive nemutengo wakakwira kwazvo, uyo wairatidza kuburikidza nedhodhi kana iro dhiraivhu rakaverengerwa panguva iyoyo, diode ratakaona. uchienderera mberi patakatanga yedu PC ye ziva payakatanga zvizere.
Ichi chishandiso chinouya kuzotsiva iri diode rerudzi, rakanakira avo vashandisi vasati vatendeukira kuSSD uye vanoda kumwe kuratidzwa kwekuziva kana sisitimu yekushandisa yapedza kutanga kutanga kutora maoko avo paMac. Dhisiki Chiitiko, iri nyore application kuti isu isa chiratidzo pane yepamusoro menyu bar, uye kuti tinogona kumisikidza kuitira kuti chero rakaomarara disk rakabatana nePC yedu rinotanga nguva dzese.
DiskActivity haigone kutipa sarudzo dzekumisikidza, asi pakati peyainopa, tinogona kuwana iyo yatinogona kushandisa zvakanyanya. Iyi sarudzo inobvumira iyo application kuti itizivise nguva dzese painoverenga chero eakaomarara madhiraivhu atinayo paMac yangu kana kungoti nguva dzese padzinoiswa kushanda pane zvemukati zvakaoma dhisiki.
Izvo zvinotibvumidzawo kuti tishandure icon uye neruvara iyo iyo ichatizivisa isu kuti chero maMac edu akaomarara madhiraivhi ari kuwanikwa. Sekureva kwemugadziri, iko kunyorera kune kwakanyanya kuderera kukanganisa zvese pakutanga uye pane zvakajairika mashandiro edu Mac. DiskActivity ine mutengo wenguva dzose muMac App Store ye0,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » DiskActivity inoongorora mashandisiro eedu rakaomarara disk, yemahara kwenguva pfupi
Iyo jailbreak yeTVOS 10.1 inogona kunge iri yechokwadi
Raibhurari muMapikicha, Autostart pa2016 MacBook, macOS 10.12.3, Tim Cook Zviito, uye zvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac